TPS Somalia | သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်? | USAHello
TPS ဆိုမာလီယာ - သင့် TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဓာတ်ပုံ: Arthur Nazaryan for CNN
ငါ၏အမှုခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကို?
သငျသညျကောင်းသောအကြောင်းရင်းရှိပါက USCIS တစ်နှောင်းပိုင်းကမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ် re-မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ. အဆိုပါကိုသွားပါ USCIS TPS information page နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “နှောင်းပိုင်းငြ်ူ့ခင်း” သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်ထွက်ရှာရန်.
သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာ status ကိုပြန်ရှေ့မှာဘာကိုသွားပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏အဆင့်အတန်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သို့မဟုတ်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထားခဲ့နိုင်သည်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ status ကိုချိန်ညှိဟုခေါ်သည်.
သင်ရှာလိုရသည် နှင့်our country’s US embassy website here.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 1705 DeSales St NW, Ste 300, ဝါရှင်တန်ဒီစီ 20036.
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်: (202) 296-0570.